तीन युवती, तीन युवक, नाै हजारमा कुरा मिल्यो, तर पछि नाै युवक आएपछि…. – Chautari Online
October 24, 2020 542
एक फार्म हाउसमा तीन युवतीहरूमाथि सामूहिक अनैतिक कार्य भएको घटना प्रकाशमा आएको छ । पुलिसले यस घटनाको प्रतिवेदन दर्ता गरी सातजनालाई पक्राउ गरेको छ र बाँकी दुई अझै फ रा र छन् । हाल प्रहरीले फार्म हाउसलाई सिल गरी दुई युवकको खोजी शुरू गरिसकेको छ । यो घटना भारत, उत्तर प्रदेशको नोएडामा भएको हो । यस सम्बन्धमा, गौतमबुद्ध नगरका वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णले भने कि तीनै जना कल गर्लहरू दिल्लीका हुन् ।
ती मध्ये एक कल गर्लले बुधबार पुलिस स्टेशनमा रिपोर्ट दर्ता गरिन् । उक्त प्रतिवेदनमा ती युवतीले भनिन्, म लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन नजिकै ग्राहकको खोजीमा राति ११ बजे आफ्नो साथी सँगै उभिएकी थिएँ । यस बीच, एक सेतो रंगको कार आयो र त्यहाँ रोकियो । कारमा २ जना मानिस थिए । उसले ९ हजार रुपैयाँमा एक रातको लागि ३ जना युवतीहरू बुक गर्‍यो । यस पछि, कारमा बसेर, उनले नोएडाबाट दिल्ली ल्याए ।
एसएसपीका अनुसार जब फार्म हाउसमा कल गर्लले तीन जनाको सट्टा ९ जना मानिस हुने थाहा पाए, केटीहरुले मानेनन् । यो सुनेपछि केटाहरु रिसाए र उनीहरूले पि टे र केटीहरुमाथि अनैतिक काम गरे।
Prevत’स्करहरद्वारा ह’त्या गरिएका असई गोविन्दकि श्रीमतिको यस्तो छ भनाइ, हामी दुःखीले कसरी बाँच्ने सरकार? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextअपरिचित पुरुषसँग लगातार सात पटकसम्म शारिरिक सम्बन्ध राखेपछि……